Ny Central Television Ao Shina, Tantànan’ny Fanjakana, Voatsikera Noho Ny Fakàna Tàhaka Ny Asan’ny Mpaka Sary Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2015 5:27 GMT
Iray amin'ireo sary nalaina tamin'ny Starry Tibet an'i Wang Yuanzhong, tao amin'ny fandraharan'ny CCTV. Dikasary tamin'ny Lahatsoratra Weibo an'i Wang.
Voatsikera noho ny fakàna tàhaka ny asan'ny mpaka sary miasa ho an'ny tenany, ary noho ny valinteny feno tsy firahirahiana nataony ireo fitsikerana azy ny China Central Television (CCTV). Tsy vao voalohany izao no nandika hevitra na asan'olon-kafa ho an'ny fandaharany ny CCTV tantànan'ny fanjakana. Raha tokony hijery ireo fiampangàna azy izy, niteny tamin'ny polisy indray ny CCTV mba hanadihady ilay mpaka sary noho ny fisolokiana, ary nosivanina sy nofoanana tsy ho hita ao amin'ny Aterineto intsony ireo tatitra eo an-toerana momba ilay fifanolànana momba ilay fakàna tàhaka asan'olona.
Ny 10 Septambra, Wang Yuanzong, mpaka sary miasa ho an'ny tenany ao Wuhan, faritanin'i Hubei, nitaraina tao amin'ny Weibo (sehatra mitovy amin'ny Twitter fa any Shina) fa nangalarin'ny fandaharan'i CCTV “The Beautiful Villages in China” (Ireo Tanàna Tsara Any Shina) ny asany amin'ny fakàna sary, “tsy nangatàhana fahazoan-dàlana avy aminy.”
Nitady ny hifandray haingana tamin'ny CCTV i Wang, kanefa vaka saina tamin'ny valintenin'izy ireo. Nihodinkodina tamin'ny resaka natao an-tariby fotsiny ilay olona nilaza ho “mpianatr'asa ao amin'ny CCTV”, tsy nety niteny valiny mahitsy tamin'ny fangatahany hahazo izay olona misahana ilay fandaharana. Nilaza mihitsy ilay “mpianatr'asa” hoe “Dia maninona raha nampiasa ny asanao ny CCTV [tsy nahazo fahazoan-dàlana], mieritreritra ve ianao fa tsy mety izany?”
Noraiketin'i Wang ho tahirim-peo ilay resaka an-telefona ary nampidiriny tao amin'ny lahatsoratra am-bilaogy, tamin'ny fanazavàna ho an'ireo mpamaky fa nàka tàhaka ny sary Starry Tibet (Tibet Feno Kintana) izay asany ny fandaharan'ny CCTV, sary nalainy tany amin'ny toerana efatra samihafa tany Tibet ny taona 2013. Nandaniany andro maro ny fakàna ireo sary tena sarotra, izay nalaina tamin'ny toetrandro ratsy ary teny amin'ny toerana ambony hatrany amin'ny 5,000 kilometatra.
Araka ny filazalazan'i Wang azy:
Ny tiako hambara dia hoe nandaniako hery betsaka ny asako. Niharatsy nandritra ny taona tany Tibet ny fahasalamako. Ary ankehitriny, nanome ahy valinteny sahala amin'izany, izay mahatonga ahy halahelo mafy ny CCTV ofisialin'i Shina.
Taorian'ireo fitadiavana fifampiraharahàna nataon'i Wang, tamin'ny antso an-telefaona, nanova ireo andinindininy afaka ahazoana azy ao amin'ny vohikala ofisialin'ilay fandaharana ny CCTV, nanomboka tamin'ny nomerao telefaona ka hatramin'ny adiresy imailaka.
Raha ny rariny no tokony hatao, ny fampitahorana no misy
Taty aoriana kelin'ny andron'iny ihany, nilaza tamin'ny Weibo-ny i Wang fa nampitahorin‘ireo mpiasan'ny CCTV izy, izy ireo izay nilaza fa handeha ho any amin'ny polisin'i Hubei ary hangataka azy ireo hanao fanadihadiana azy noho ny fiahiahiana “fisolokiana.” Nolavina ihany koa ny fangatahany hahazo vidin-kasasarana mitentina 250.000 yuan.
Fanavaozana ny fivoaran'ny raharaha. Io maraina io, niresaka tamin'ny mpiasan'ilay fandaharana aho ary nangataka RMB25.000 yuan (eo amin'ny 3920 dolara amerikana eo) ho vidin'ny fizakàmanana. Fa tsy vonona ny hanao izany izy ireo ary nandresy lahatra ahy ny tsy handefa amin'ny Aterineto ilay fifandirana raha tsy izany tsy ho afaka ny hiaraka hiasa amin'i CCTV intsony aho any aoriana. Nandà ny handoa izy ireo ary nilaza tamiko fa hanao fanadihadiana ahy noho ny fisolokiana ny polisin'i Hubei…
Araka ny hasehon‘ny fikaroham-baovao amin'ny Google, nisy ireo media teo an-toerana nitatitra momba ny olan'i Wang ary ny fikarakaràna tsy ara-drariny natao azy, fa toa nofafàna daholo tsy nisy fanazavana ireo tatitra rehetra, mamerina ny hoe “404 tsy hita” ny pejy nisy teo aloha taty anaty vohikala .
Namoaka fanazavana ny kaonty Weibo ofisialin'ny fandaharan'ny CCTV avy eo, izay niaikeny fa novidiana tamin'ny Taobao ny sary nampiasain'izy ireo tamin'ilay fampisehoana, Taobao izay vohikala fivarotana lehibe indrindra amin'ny Aterineto. Nilaza an'i Wang ilay fanambaràna, fa tsy nanambara kosa hoe ohatrinona ny vola haloan'izy ireo aminy.
Tsy fahampian'ny fahampafantarana ny fizakàmanana
Nisy mpampiasa Weibo iray nanome hevitra manatsara zavatra, izay miantso ny CCTV mba hifanaraka amin'ny Taobao mba hanamafy ny toeran'ny fizakàmanana any Shina:
Raha tena novidiana tokoa tao amin'ny Taobao ilay [sary], tokony hifanaraka amin'ny Taobao ny [CCTV] mba hitady ilay olona nivarotra ireo asa ireo, ary hanamarina hoe nanome fahazoan-dàlana io mpivarotra io ve i Wang Zongyuan? Raha toa ka tsia, tokony hanadihady ny [CCTV], hanome valina feno [amin'ilay mpaka sary], ary hanatsara ny tontolon'ny fizakàmanana? Amin'ny maha-voalohany azy eo amin'ny indostria, tokony hanome ohatra [ny CCTV].
Na teo aza ny tsy fisian'ny valinkafatra misimisy kokoa avy tamin'ny CCTV, mbola mitazona ny fotokeviny ihany i Wang amin'ny fiarovana ny fizakàmanany. Ny andro taorian'ilay zava-nitranga, nitaraina izy fa in-efatra nohitsakitsahana ny fizakàmanany tato anatin'ny iray volana. Tafiditra amin'ireo mpanitsakitsaka ny Youku [iray amin'ireo vohikalanà lahatsary lehibe indrindra any Shina], Liaoning sy ny televiziôna Hunan, ary orinasa iray mpaka sarinà mariazy, izay samy nampiasa ny asa sariny daholo kanefa tsy nahazo alàlana avy taminy. Nilaza i Wang fa mikasa ny hametraka fitoriana an'ireo fikambanana efatra ireo noho ny fanitsakitsahana fizakàmanana.
Miainga avy any amin'ny fianarana ambony ka hatrany amin'ny fianarana tsotra ary ny faribolan'ny kanto ao Shina, lasa zava-niseho mihitatra be ny fakàna tàhaka ny asan'ny olon-kafa ary lasa fototry ny fitotongan'ny fientanentanan'ireo mpamorona. Mamorona zava-dratsy fanampiny ho an'i Shina izany, amin'ny maha-firenena iray azy izay mitolona hiala amin'ny hoe firenena mpaka tàhaka fotsiny mba lasa ho firenena mpamorona.
Ny taona 1990, na dia nandany ny lalànan'ny fizakàmanana aza ny Kaongresy Nasiônalin'ny Vahoakan'i Shina, matetika no lafo loatra ho an'ny olon-tsotra ny fiarovana tsara ny fizakàmanany. Mazàna no mahazo solon-kasasarana kely fotsiny ireo tratran'ny fakàna tàhaka ny asany, raha tsy mahavita mandoa ny saran'ny fitoriana izay lafo dia lafo kosa ny ankamaroan'izy ireny. Ny tantaran'i Wang no porofo ahitana fa ny olon-tsotra, izay nohitsakitsahan'ireo manampahefana ny fizakàmanany, dia matetika no eo amin'ny toerana tsy mahazo tombony.
Tao amin'ny lahatsoratny, miantso ny CCTV i Wang mba hampiakatra ny fanentanana momba ny fizakàmanana ao aminy ary hanaiky ny lanja mavesatry ny fandraisana andraikitra amin'ny fampiasàna ny votoaty an'olon-kafa:
Amin'ny maha mpanao jadona sy lehibe indrindra ilay televiziôna, raha tsy manaja ny fahampafantarana ny fizakàmanana sy ireo mpamorona voalohany ny [CCTV], ahoana no ahazoan'ireo mpaka sarintsika feno fisainana hahita fanantenana? Mety hihena be mihitsy ny isan'ireo mpamokatra votoaty satria samy mahatsapa ho diso fanantenana tanteraka ny rehetra.